Asɛm a Ɛwɔ Ha Yi Bɛma Woahu Sɛnea Wobɛtwe Wo Ho Afi Aguamansɛm Ho, Na Ama Woahu Nea Enti a Ɛsɛ Sɛ Woyɛ Saa | Mmabun
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French French Sign Language Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kachin Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Nepali Norwegian Oromo Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Quiche Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tojolabal Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Urhobo Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Sɛ Mahwɛ Aguamansɛm Ama Aka Me Hɔ a, Menyɛ Dɛn?
Ɛsɛ sɛ wuhu sɛ aguamansɛm nyɛ adepa. Ɔbarima ne ɔbea nna yɛ adepa a efi Onyankopɔn hɔ, nanso aguamansɛm botae ne sɛ ɛbɛsɛe ade a nidi wom yi. Sɛ wuhu sɛ aguamansɛm nyɛ adepa a, ɛbɛboa wo ama ‘woakyi bɔne.’​—Dwom 97:10.
Sɛ wohwɛ aguamansɛm a, susuw nea ebetumi afi mu aba no ho. Nnipa a woyi wɔn wɔ ponografi mu no, ɛsɛe nidi ne obu a wɔwɔ no koraa. Wɔn a wɔhwɛ no nso, egu wɔn ho fi, na ɛma wɔn anuonyam so tew. Bible kae a ɛmmoa sɛ: “Onitefo ne nea ohu mmusu na ɔde ne ho hintaw.”​—Mmebusɛm 22:3.
Bɔ w’adwene pɔw sɛ wobɛyɛ ho biribi. Ɔnokwafo Hiob kaa sɛ: “Mabɔ m’adwene pɔw sɛ meremfa adwemmɔne nhwɛ ɔbaa nnya ne ho akɔnnɔ da.” (Hiob 31:1, Today’s English Version) Wo nso, sɛ wopɛ sɛ ‘wobɔ w’adwene pɔw’ a, wubetumi aka akyerɛ wo ho sɛ:
Sɛ me nkutoo hyɛ baabi na obiara nni hɔ a, merenkɔ intanɛt so.
Sɛ mewɔ intanɛt so na mikopue aguamansɛm so a, mefi hɔ ntɛm ara.
Sɛ mantumi anhyɛ me ho so na mehwɛ aguamansɛm a, mɛka ho asɛm akyerɛ m’adamfo bi a obetumi aboa me.
Ade a ɛwɔ aguamansɛm ho ne sɛ, worekɔ so hwɛ nyinaa na ne gyae reyɛ wo den
Bɔ ho mpae. Odwontofo no srɛɛ Yehowa Nyankopɔn sɛ: “Mma m’aniwa nnhwɛ ahuhude.” (Dwom 119:37) Onyankopɔn pɛ sɛ wudi ponografi so nkonim. Sɛ wobɔ mpae srɛ no a, obetumi ahyɛ wo den ama woayɛ nea ɛfata!​—Filipifo 4:13.
Ka ho asɛm kyerɛ obi. Sɛ wunya obi a wubetumi aka w’asɛm akyerɛ no a, ebetumi aboa wo pa ara ama woagyae aguamansɛm hwɛ.​—Mmebusɛm 17:17.
Kae Sɛ: Bere biara a wobɛpo aguamansɛm no, woadi nkonim kɛse. Ka wo nkonimdi no ho asɛm kyerɛ Yehowa Nyankopɔn, na da no ase sɛ ɔmaa wo ahoɔden. Sɛ wotwe wo ho fi aguamansɛm ho a, wobɛma Onyankopɔn koma ani agye!​—Mmebusɛm 17:17.
Adɛn nti na yɛbɛtumi aka sɛ ponografi te sɛ sigaretnom?
Share Share Sɛ Mahwɛ Aguamansɛm Ama Aka Me Hɔ a, Menyɛ Dɛn?
So Bible no Kasa Tia Aguamansɛm a Wɔhwɛ?